5 nzọụkwụ ihichapu cache, kuki, na ihe ndị mere na android ekwentị
Smart igwe bụ dị ka kọmputa na ha mkpa ka a nọgidere na-enwe site n'oge ruo n'oge. N'ezie mmezi gụnyere ngwaike na software usoro niile iji na-na-aka na okirikiri ndụ gị smart ekwentị. Otu ihe dị mkpa software mmezi usoro nke ga-melite arụmọrụ nke gị smartphone bụ ihichapu cache, kuki na akụkọ ihe mere eme site n'oge ruo n'oge. E nwere ụfọdụ ndị bụ isi usoro iji ibido malite iji isi android na ihe nchọgharị atụmatụ. I nwekwara ike ime ka ojiji nke ụfọdụ oké ngwa ọdịnala na ahịa. Anyị agbajikwa ndị a niile n'ihi na ị na isiokwu a na mfe n'ụzọ omume. Ya mere, ọ bụrụ na ekwentị gị na-agba ọsọ ngwa, ọ bụ oge na-ụfọdụ ndetu na chọpụta otú i nwere ike ikpochapụ niile junk.
Doro Anya ihichapu cache, kuki, na ihe ndị mere na dị iche iche nchọgharị na android ekwentị
Google chrome bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu nchọgharị na ụwa bụghị naanị n'ihi na desktọọpụ ọrụ kamakwa na android ọrụ dị ka mma. Ọ bụrụ na ị maara na desktọọpụ version, mgbe ahụ android version ọzọ bụ ma ọ bụ obere yiri. N'eziokwu, ndị dị oké mkpa atụmatụ bụ otu.
Ị ga-mkpa ịchọta Ntọala mgbe ahụ enweta na Nzuzo.
The nzọụkwụ ọzọ bụ enweta na Doro Anya Nchọgharị Data
Ego na igbe na-esote Cache, Nchọgharị History, Kuki, weebụ na saịtị data na enweta na Doro Anya.
Firefox bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu nchọgharị na PC ụwa na ọ bụ inweta ihe dị ukwuu ewu ewu na ha mobile version nke otu. Ukwuu nke na-ewu ewu na-dabere na ya ịtụnanya imewe akụkụ na ka ọrụ na-agagharị ma jikwaa ha nchọgharị na ala. Ọ na-enye ohere ka jikwaa ha onye data na ala. Iji kpochapụ ihe data:
Enweta na menu button na gị na ihuenyo
Họrọ Ntọala, mgbe ahụ, enweta na Nzuzo na-ahọrọ Doro Anya Ugbu a
Ego na niile data na ị chọrọ ikpochapụ ma họrọ Doro Anya Data
Opera Mini ka na-abụ ihe kasị ewu ewu nchọgharị iji ọtụtụ mobile ọrụ ekele ya àgwà data mkpakọ. E nwere elu likelihood na ị na-eji ihe opera Obere gị android ama na dabere na version ị na-agba ekpocha gị onye data na a na ngwa na-mfe, dị nnọọ na-esonụ:
Emeghe gị opera Obere na enweta na n'ụlọ gị gị na akara ngosi
Site ndepụta nhọrọ, họrọ on Nzuzo
Ị ga-ahụ họrọ ọrụ ị chọrọ ịrụ site na ndepụta ntụgharị Doro Anya Cookies / Doro Anya Okwuntughe / Doro Anya History
Top 3 History Erasers maka Android
Ya mere, ugbu a, ị nwere oru Mara otú na-esi ọcha data si ọkacha mmasị gị nchọgharị Ma ọ gaghị adị mma ma ọ bụrụ na i nwere ihe ngwa na-eme ọrụ gị? A akụkọ ihe mere eme nchicha ma ọ bụ Cleaner bụ ezi ihe nlereanya nke ihe ngwa nke karịrị echiche na-enye nhicha ọrụ na ga-eme ka ndị ọrụ mfe maka ihe ọ bụla android ọrụ. Ịchọta ezi akụkọ ihe mere eme nchicha nwere ike ịbụ a akụda ọrụ ma ọ bụghị ọzọ dị ka anyị meworo ihe omume na kpọkọta ndị kasị mma nke ndị na ahịa. N'ebe a, anyị na-enye gị atọ nke kasị mma erasers n'ihi na gị android smartphone
History nchicha-Private Clean ngwa
Nke a bụ ngwá ọrụ na eguzobewo onwe ya dị ka a top akụkọ ihe mere eme Cleaner maka android ekwentị ọrụ. Ọ bụ ihe nke a CC Cleaner ma, oge a na android ngalaba. Ọ bụ a free ngwá ọrụ nke ga-ehichapụkwa anya mmiri ọ bụla n'akụkọ ihe mere eme na cache faịlụ site na ekwentị gị!
Ọ nwere ọtụtụ nke ihicha nhọrọ gụnyere google map data cleanup nhọrọ
Ọ pụrụ kpọgidere a bit karịsịa na ochie ekwentị ụdị
Ọcha nna ukwu
N'adịghị ka ndị History nchicha ngwa, nke dị ọcha nna ukwu ọzọ bụ nke a nna ukwu nke Ọ dịghị onye ma a Jack niile trades. Ndị dị mfe, nke a bụ ihe na ngwa na-nwere ike ọcha nta ka ọ bụla faịlụ sitere na site junk faịlụ, nzuzo data ka ngwa data. Ọcha nna ukwu dịkwa nnọọ mfe iji adịghị echefu na o nwere a jụụ haziri interface na mgbari ya atụmatụ maka gị.
Enye ihe karịrị akụkọ ihe mere eme ihicha-ma ọ bụrụ na-enye ezigbo nche na atụmatụ nakwa
Ọ na-e ịzọpụta batrị
Ọ ejisie CPU ọrụ
Ọ ukwuu ad egosipụta ebe ọ bụ free
A bụ ihe ọzọ multi-ọtọ ngwá ọrụ nwere ike ọcha ngwa cache, akụkọ na ndekọ na mfe taps. Ọ na-maara na-a anọ na otu ngwá ọrụ e nyere ka ọ nwere anọ Cleaner wuru n'ime ya-an-kpọ Cleaner, Cache Cleaner, History Cleaner, Kpọọ / Text ndekọ Cleaner.
Ọ nwere ike na ọcha SD kaadị
Ọ nwere ike ijikwa ngwa
Ọ nwere nza mmapụta elu mgbasa ozi na ikpe nke free version
The jụụ ihe na ndị a ngwa ọdịnala bụ na ha na-mgbe wee ruo ụbọchị na re-ahazi idozi chinchi site n'oge ruo n'oge. Na ndị ọzọ okwu, unu niile chọrọ ime bụ na taabụ na Mmepụta saịtị site n'oge na-enwe ọhụrụ atụmatụ na ga-afụ gị n'uche. Ọ dị mkpa na-na-na-anya na nche akụkụ nke data ejizi na a ikele welie nche ma belata Ohere nke cyber-ọgụ.
> Resource> ihichapu> 5 Nzọụkwụ ihichapu Cache, Kuki, na History na android ekwentị